सारा ड्र ग्स केसमा तानिएकै बेला सेफअलीलाई करिनाले सहयोग नगर्न भनेपछि… फोनसमेत कब्जामा! – PathivaraOnline
Home > बलिउड > सारा ड्र ग्स केसमा तानिएकै बेला सेफअलीलाई करिनाले सहयोग नगर्न भनेपछि… फोनसमेत कब्जामा!
admin September 30, 2020 September 30, 2020 बलिउड, समाज	0
एजेन्सी । सुसान्त प्रकरणमा समाहित बनेर यतिबेला मुम्बइमा ड्र’ग्स काण्डले तहल्का मच्चाइरहेकाे छ । यसै क्रममा बलिउडका धेरै नायक नायिकाहरू तानिएका छन् । बलिउडमा भर्खरै उदाउँदै गरेकी नव नायिका सारा अलि खान यतिबेला सुशान्तको ड्र’ ग्स केसमा तानिएकी छिन् । यतिबेला सैफअलि खानकी प्यारी छोरी साराअलि खान एनसीबीको समनलाई पच्छ्याउँदै बयानकालागि एनसीबीले बोलाएको समयमा एनसीबी अफिसमा उपस्थित भईरहेकी छिन् ।
उता बाबु सैफअलि भने आफ्नी दोश्रो श्रीमती करिना कपुर खान र छोरा तैमुरसंग मुम्बईमा सारा एक्लै छोडेर आफ्नै गाउँमा गएका छन् । सैफअलिको यो व्यवहारलाई धेरैले आफ्नै छोरी साराको पक्षमा न्याय नगरेको भन्ने टिप्पणी गरेका छ्न् भने धेरैले सैफअलिले नाबालक तैमुरको भविष्य सोंचेर उस्को बृद्धि र बिकासकोलागी जे गरे ठीक गरे भन्ने जस्ता टिकाटिप्पणी पनि गरिरहेका छन् ।
खबरका अनुसार सैफअलि खानलाई करिनाले साराको मद्यत कुुनै पनि हालतमा नगर्न भनेको हुनाले सैफअलिले त्यसो गरेका हुन् भन्ने पनि बुझिएको छ । करिनाले यदि सैफअलिले सारालाई सहयोग गर्न चाहे भने आफुले छोरा तैमुरको कस्टडी आफैसंग राखेर सैफअलिलाई डिर्भोस दिने कुरा गरेको हुनाले सैफअलिले चाहेर पनि छोरी सारालाई सहयोग नगरेको समाचारहरु बाहिरिएको छ ।
यता सारालाई बाबुको सहयोगको खाँचो परेको बेला आफुुलाई एक्लै छोडेको हुनाले सारा निकै नै टु टि स’केको पनि बताईएको छ । साराकी आमा अमृताले पनि यतिबेला पुर्वपति सैफअलिलाई सम्पर्क गर्ने अनेक कोसिस गरि रहेकी छन् । तर सैफअलिले न छोरी साराको न त पुर्वपत्नि अमृताको कसैको पनि फोनको जवाफ दिएका छैनन् । खबरका अनुसार सैफअलिको फोन करिनाले जफत गरेको बताईएको छ ।
२५ वर्षकी सारा सुशान्तको ड्र’ ग्स केसमा तानिरहेको बेला आफ्नै बाबुले पनि साथ छोडिदिंदा उनको फिल्मी करियरको यात्रा सकिने पक्का भएको छ । अप्ठ्यारो पर्दाको अवस्थामा बाबुले आफ्नो साथ छोडिदिंदा साराले अब आफ्नो लडाई आफैं ल ड् नु पर्ने भएको छ । खबरका अनुसार साराले बाबुु सैफअलिलाई बाचा कबुल गराएर आफुबाट टाढा लगेको र आफुलाई सहयोग गर्न नदिएको भन्दै अब साराले करिनाको पनि एनसीबी सामु पोल खोल्ने बताईएको छ ।
बेचिएकी बहिनीलाई बिदेशबाट फर्किएका दाईले बे’श्यालयमा भेट्दा ! यस्तो पनि हुँदो रहेछ (भिडियो हेर्नुस)